Ole Gunnar Solskjær oo ammaan kala dul dhacay xiddig ka tirsan kooxda Man United kahor kulanka caawa – Gool FM
(Manchester) 10 Agoosto 2020. Tababaraha reer Norway iyo kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa kahor kulanka caawa ee Copenhagen wuxuu amaaney weeraryahankiisa Anthony Martial.
Dhinaca kale tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay in Anthony Martial uu ku nool yahay waayihii ugu fiicnaa ee xirfadiisa ciyaareed.
Wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Ole Gunnar Solskjær kahor kulanka caawa ee Copenhagen, wuxuuna yiri:
“Jir ahaan, Martial wuxuu ku jiraa heerarkii ugu fiicnaa xirfadiisa ciyaareed”.
“Waan ognahay inuu dhalin karo goolal caalami ah, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan arko isagoo u dhalin kara goolal si fudud”.
“Wuxuu wax badan ka shaqeeyaa jirkiisa iyo awoodiisa jireed, wax badan ayuu sameyn karaa”.
“Waan ognahay in Europa League ay noo tahay fursad weyn ee aan ugu guuleysan karno koob, ama aan meel fog ka gaarno tartankan”.
Si kastaba ha noqotee, Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa u duushay dalka Jarmalka, halkaasoo ay caawa kula soo ciyaari doonaan tartanka Europa League, kulan qeyb ka ah saddeed dhammaadka tartankaasi naadiga Copenhagen.